Matrix Body PDC Drill Bit dị mma maka usoro siri ike na nke siri ike yana profaịlụ okpueze kachasị mma yana okirikiri mma. Ọ nwere ike nweta arụmọrụ ka mma na etiti etiti. Ogologo ndụ ọrụ yana ịrụ ọrụ dị elu na -enyere aka belata ọnụ ahịa mkpọpu ala.
Steel Isi PDC malite ịgba Bit
PDC mkpọpu ala bit na -bụ -eji na -aku mmanụ ọma, gas ọma, mmiri ọma, wdg Anyị na -chepụta na -emepụta specifie PDC bit na ezi arụmọrụ ọ bụla nro, ọkara na ike guzobere.
Ahụ nchara nke nwere tungsten carbide n'elu (WC), mee mkpọtụ ma ike dị elu yana nguzogide abrasion siri ike.
Ọdịdị okirikiri torque gburugburu na ngwanrọ emebere ezé na -ebelata ihe mbepụ na -abawanye & nwekwuo ndụ.
Nkà mmụta sayensị na -egwu ihe na -agbanwe agbanwe nke ike na nhazi hydraulic na -eme ka usoro mkpọtụ dị larịị.
Steel Body PDC Drill Bit na -enweta ROP ka mma n'ụdị dị nro na ọkara siri ike yana ike mkpakọ dị ala.
Matrix Isi PDC Bi-center Drill Bit
Matrix Body PDC Bi-center Drill Bit bụ ihe pụrụ iche ahaziri iche maka ịmegharị olulu mmiri. Ọ nwere uru nke ịdị egwu ala dị elu, ndụ ogologo oge, obere torque na mkpọtụ dị ala n'oge a na -egwu ala.
Bit dị ime
Ọdịdị cone dị n'ime: Ọdịdị dị n'ime nke bit na -ewere ọdịdị na okirikiri jiometrị pụrụ iche, nke na -eme ka arụmọrụ mbelata nke akụkụ nke bit ahụ dịkwuo ogologo ma na -agbatịkwu ndụ nke bit.
Drill Bit nke gbara ime
Diamond Bit nke etinyere ime nwere ọnya ezé nke nwere ọnya dị elu na nhazi mmekọrịta plastik siri ike ma sie ike.
Tricone Steel Nkịtị
TCI Tricone Bit dị mma maka ịdị nro dị nro yana obere mkpakọ ike na oke ike, dị ka apịtị apịtị, gypsum na limestone dị nro, wdg. nkwụsị mgbochi na ndụ ọrụ nke bit.
Ọnụahịa kasị elu nke TCI